September | 2017 | Steadfast Trading | Apex Auto Body Shop
PROWERBALL 4LIGHTS HEADLIGHT RESTORATION KIT
၎င်းသည် ချောမွေ့တောက်ပြောင်သည့် ပလပ်စတစ်နှင့် အခရိုင်းလစ်ရှေ့မီးကြီး အမျိုးအစားအား လုံးတွင် ပကတိကြည့်လင်မှုကို လျင်မြန်စွာနှင့် ဘေးကင်းစွာ ပြန်လည်ရရှိစေရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းကာ ကွယ်ပေးရန် ရည်ရွယ်ဖန်တီးထားသည်။ အရောင်ဝါလာခြင်းနှင့် မှိန်လာခြင်းကို အလွယ်တကူ ဖယ်ရှားသန့်စင်ပေးသည်။ အလွန်သေးငယ်သည့်အစင်အခြစ်များ၊ အညစ်အကြေးအကွက်များနှင့် အပြစ်အနာအဆာများကို ....
ဤမှန်ဆေးရည်သည် လမ်းမှဖုန်လွှာများ၊ ဆီပေကျံမှုများနှင့် အညစ်အကြေးများကို အကြွင်းမဲ့ ဖယ်ရှားပေးသည်။ မော်တော်ယာဉ်သုံးမှန်၊ ရှေ့မီးကြီး၏ မှန်ဘီလူးများ၊ ကြည့်မှန်များနှင့် ခရုမ်း အများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည့် ဤမှန်ဆေးရည်သည် အစင်းကြောင်းများ မကျန်ရစ်စေပါ။ ထို့ပြင် ၎င်းတွင် အမိုးနီးယားပါဝင်သည့်အတွက် အရောင်ပါသည့်ပြတင်းမှန်ကို ....
Mothers ၏ R3 သည် ဆေးသား၊ မှန်၊ ဗီနိုင်းစနှင့်အခြားမည်သည့် ပြင်ပမျက်နှာပြင်မှမဆို ရာဘာ နှင့် ပွတ်တိုက်ရာများ၊ ဖုန်းများ၊ ရွှံ့များနှင့် အညစ်အကြေးများကို လုံခြုံလျင်မြန်စွာ ဖယ်ရှားပေးနိုင် သည့် ပက်ဖျန်းပြီးသုတ်ပစ်ရသော သန့်စင်ဆေးဖြစ်သည်။ ခေတ်မီဓာတုဗေဒနည်းလမ်းများဖြင့် ....
မည်သည့်ပြင်ပမှန်သား မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်မဆို စွဲထင်နေသည့် ရေကွက်များနှင့် အစွန်းအထင်း များကို ဖယ်ရှာပေးသည်။ သတ္တုဓာတ်များကိုပျော်ဝင်စေသည့် အားကောင်းသောဓာတ်ကူပစ္စည်း က နေလောင်ထားသည့် သဲမှုန်များ၊ ဆားငန်ရေများ၊ သစ်စေးများ၊ ကတ္တရာစေးများ၊ ပိုမွှားများနှင့် မှုတ်ဆေးစွန်းထင်းမှုများကို ဆွဲယူဖယ်ရှားပေးသည်။ ရှေ့လေကာမှန်များ၊ ပြတင်းပေါက်မှန်များနှင့် ....
သင့်ကားဆေးသား၏ အချို့နေရာများ၊ ဥပမာ-တံခါးနှင့် နောက်ဖုံးအစွန်းများ၊ တံခါးလက်ကိုင်၊ သော့ပေါက် စသည့်နေရာများသည် ပို၍ထိုခိုက်ခံရသည်။ Mothers ၏ အစင်းအခြစ်ဖျောက် ဆေးကို မည်သည့်ဆေးအမျိုးအစား၌မဆို အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဆေးသားကိုထိန်းသိမ်းပေးကာ အစင်း အခြစ်ရာများကို ဖယ်ရှားပေးသည်။ ၎င်းသည် ပေါလစ်တစ်မျိုးပင်ဖြစ်၍ ....
၎င်းသည် နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်သည်။ Mothers ၏ Pure Brazilian Carnauba Wax ဖယောင်းကို ဘရာဇီးနိုင်ငံမှ အကောင်းဆုံး အ၀ါရောင်ကာနာဘူးဝါးဆီဖြင့် ပြုလုပ်သဖြင့် တောက်ပမှုနှင့် ကာကွယ်ပေးမှု တို့တွင် သာလွန်ကောင်မွန်သည်။ ၎င်းသည် တိုက်စားခြင်းမရှိသဖြင့် သင်နှစ်သက်သလို ....
Mothers ၏ Micro-Polishing Glaze ကို ပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင့်ဆေးသား၏ အရောင် ပေါ်လွင်မှုနှင့် စိုပြေမှုတို့ကို တိုးမြှင့်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ မည်သည့်အရောင်ပင်ဖြစ်စေ ဆေးသား၏ အင်္ဂါရပ်ကို ပိုမိုပေါ်လွင်စေမည်ဖြစ်ပြီး ၀င်းလက်တောက်ပစေမည်ဖြစ်သည်။ Mocro-Polishing Glaze သည် အပြစ်အနာအဆာလေးများကို ....
၎င်းသည် အမြင့်မားဆုံးသောဖယောင်းစနစ်၏ အခြေခံအဆင့်ဖြစ်သည်။ ဤပေါလစ်သည် သံချေးတတ်ခြင်း ဖယောင်းအဟောင်းများ၊ စုပုံလာခြင်းနှင့် အခြားညစ်ညမ်းပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားပေးကာ သင့်ဆေးသားကို သန့်စင်တောက်ပြောင်စေသည်။ ဤအနုစားပေါလစ်သည် အပြစ်အနာအဆာများကို ပြေပျစ်စေပြီး အစင်း အခြစ်လေးများကို ဖယ်ရှားပေးသည်။ သင့်ဆေးသား၏ ရုပ်သွင်သည် ပေါလစ်ဆေးကောင်းပေါ်တွင် ....
Mothers Professional Instant Detailer သည် ဆီလီကွန်မပါဝင်သော ဘော်ဒီရုံတွင်အသုံးပြုနိုင်သော၊ ဆေးသုတ်ခံနိုင်သည့်ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး၊ မနှိုင်းယှဉ်သာသည့် ရှင်းလင်းပေါ်လွင်မှုရှိသည်။ ၎င်းဖော်မြူလာကို သီးသန့်ဖော်စပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူကာ clearcoat အပါအ၀င် ဆေးသားအမျိုးအစားအား လုံးတွင် အန္တရယ်ကင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ မည်သည့်ဘော်ဒီရုံ၌ဖြစ်စေ၊ ....
ပိုမိုတောက်ပြောင်မှုနှင့် ကာကွယ်ပေးနိုင်မှုတို့အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည့် Mothers Professional Hand Glaze ကို Foam Pad Polish နောက်တွင် သုံးစွဲခြင်းဖြင့် မယှဉ်သာသည့် ရှင်းလင်းပေါ်လွင်မှုမျိုး ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ Hand Glaze သည် အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး ....